Ubuya njani eSheremetyevo ukuya kwi-metro? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayifumana njani ukusuka eSheremetyevo ukuya kweso sithuthi?
Ukusuka kwisikhululo senqwelomoya seenqwelomoya; ungangena kwisitrato esingezantsi; kwiibhasi kunye neeteksi. Iyaqhutywa kwaye ebusuku (ukusuka kwi-1.00 ukuya kwi-5.30 iiyure) H1 ibhasiokulandelayo ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kwisikhululo seMetro; iLeninsky Prospekt ;. Ixesha eliza kuchithelwa ngumkhweli kuhambo yimizuzu engama-30 ukuya kwengama-50.
Kwisikhululo i-quot; Mlambo Stationquot; Ibhasi ilandela i-851, ixesha ukusuka kwi-5: 35 ukuya kwi-0: 49 iiyure.
Kwisikhululo seMetto quot; inokufikelelwa nge-minibus 949. Ixesha lokuqhuba ukusuka kwi-6: 45 ukuya kwiiyure ezingama-21: 45.
Kwisikhululo seMetto quot; inokufikelelwa ngebhasi 817. Iiyure zokusebenza komgaqo zisuka kwi-5: 22 ukuya kwi-0: 08 iiyure. Okanye nge-shuttle 948. Ixesha lokusebenza kwebhasi kumzila osuka kwi-6: 45 ukuya kwiiyure ezingama-21: 45.
Ungafumana kwiShermetyevo Airport ngebhasi, minibus, iteksi kunye ne-aeroexpress. Ngebhasi, ixesha lokuhamba lixesha elincinci, kodwa ixabiso lethikithi liphantsi. Eyona nto ibiza kakhulu kwezothutho kweli, yiteksi.
Ukuba uthatha isigqibo sokuhamba ngu-aeroexpresske nantsi ishedyuli:
Kwisiza saseSheremetyevo International Airport, kukho ulwazi olunje malunga nokufika kwisikhululo seenqwelomoya ukuya eMosos, oko kukuthi, nakwesiphi na isikhululo seenqwelo moya. Kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo. Eyona idumileyo: i-aeroexpress, izithuthi zikawonke-wonke (iiteksi ezihamba ngomgaqo, iibhasi), iiteksi kunye nezithuthi zomntu. Zonke iinkcukacha malunga nexesha lokuhamba, ixesha lokuhamba, abathwali baseburhulumenteni, iifowuni zokwenza ii-odolo zeenkonzo kunye nokunye, bona apha.
Eyona nto ibiza ixabiso eliphantsi ngebhasi- kukho iibhasi ngqo ukusuka kwisikhululo senqwelo moya eSremetyevo kwisikhululo senqwelo moya kaMasipala iRepernaya kunye nesikhululo seMetro uRechnoy Vokzal, kodwa hlala ukhumbula ezi zezokugqibela, usengahamba kwaye uye kwiziko usuka kubo.
Inketho yesibini, ebiza ngakumbi - ukusuka kwisikhululo esifanayo seebhasi kwisikhululo seenqwelomoya saseSheremetyevo bafuna i-minibuses kwiindlela ezifanayo.
Ukhetho lwesithathu, olusabiza ngakumbi-iAeroexpress, iqhuba qho emva kwesiqingatha seyure.
Kwaye eyona ndlela ibiza kakhulu kwiteksi.
Kungcono ukufika apho yi-Aeroexpress, kuba eKhimki i-traffic jams ayibandakanywa ebusuku kuphela, kwaye ukukhwela iteksi emva kwemini kuya kuthatha ixesha elininzi. I-Aeroexpress ifika kwisikhululo sikaloliwe saseBelorussky, ukusuka apho ungahamba khona nohambo olungaphantsi komhlaba uye naphina kwindawo enkulu. Ngokwesiqhelo isihlwele sabantu sisuka e-Aeroexpress kwicala elinye - ukuya kwi-metro, ubalandela nje aba bantu kwaye ngekhe ubene mpazamo. Uya kufika kumgca wokukhala kwe-metro yaseMoscow, kwaye apho ungazenzela isigqibo malunga nendlela engcono yokufika kwikhaya lakho, ihotele okanye izihlobo.
Inketho ebizayo kodwa ekhawulezayo:
Yeyona ilungeleyo ukufikelela eSheremetyevo yi-aeroexpress. Itikiti lingathengwa kwi-intanethi kwiwebhusayithi esemthethweni. Kule meko, kuya kufuneka uprinte ithikithi (ngebhakhowudi) okanye ngebhakhowudi iya kuthunyelwa kwinombolo yakho yomnxeba.Ungathenga itikiti kwi-ofisi yebhokisi, andikaze ndibone umgca apho. Ukukhwela kwisikhululo saseBelarusian, awudingi ukuveza ithikithi xa ukhwela, uya kuyidinga kuphela ukuba ushiye isikhululo xa ufika eSheremeyevo. Ibhakhowudi iya kudinga ukudityaniswa kwindawo yokutshintsha. ESheremetyevo, kukho izikhululo eziphambi kwezinto eziguqulwayo, unokuthenga itikiti ukuba awukhange ukwazi ukuyenza eMoscow. Itikiti libiza i-ruble ezingama-340, uloliwe ulandela ukungamisi.
Inketho engabizi kodwa ihlala ixesha elide:
Xa uphuma emotweni, jonga uphawu eludongeni, uphume ngalo ufuna ukuphuma (oku kubaluleke kakhulu!), Uphawu kufuneka lubonakalise Ibhasi le851 kwaye utolo lubonisa ukuphuma kwindlela engaphantsi.
Phuma metro, uhambe iemitha ezingama-20 ngaphambili, yima, kuya kubakho umqondiso kuyo ngamanani eebhasi ezime kule ndawo yokumisa. Qiniseka ukuba inombolo 851 ikhona.
Jonga ishedyuli yeebhasi ezingama 851. Apha ubuncinci iyure eshiyekileyo kuba iibhasi zaseMosike azifiki ngexesha, ungabambeka nakwiimpawu zendlela.
Uhambo luya kuxabisa i-ruble ezingama-28 (metro) + ii-ruble ezingama-28 (ibhasi). Ungathenga ikhadi lokuhamba elinye lemizuzu engama-90- kukho ixesha elaneleyo lokutshintshela.
Nge-Aeroexpress, eqhutywa rhoqo emva kwesiqingatha seyure, ungasifumana kwisikhululo senqwelomoya saseSheremetyevo ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseBelorussky (isikhululo sikaloliwe wedolophu; iBelorusskayaquot;). Ixesha lokuhamba yimizuzu engama-35. Makukhunjulwe ukuba kukho ikhefu: i-Aeroexpress yokugqibela ihamba ngo-00: 30 ebusuku, kwaye elandelayo kuphela nge-5:00 kusasa. Ngeli xesha, yiteksi kuphela.
Ukwenzela ukuba usuke kuso nasiphi na isikhululo seenqwelomoya ukuya kwimetro kufuneka wazi kwangaphambili malunga nokuba zikho na iibhasi okanye iinqwelomoya. Iiteksi ezivela kwisikhululo seenqwelomoya ziya kubiza kakhulu, ngakumbi ukuba uyithabatha kwisikhululo seenqwelomoya uqobo.
Ukuze ungabambeki kwi-jam yethrafikhi iiyure ezininzi, kuluncedo ukuthatha uloliwe we-Aeroexpress, oye wanyuka kathathu kulo nyaka uphelileyo, kodwa usabiza ixabiso eliphantsi kwiteksi.
Ukuba unemithwalo enkulu, okanye iisheyithi ezinkulu, ke i-minibus 949 ayizukusebenza, ikhabhathi incinci kwaye ayisihambi kakuhle, emva koko kungcono ukuthatha ibhasi engama-817 ukuya e-Planernaya.
Nanku umzobo weMetro yaseMoscow enemigca yeeroero
Ukujonga ukuba yeyiphi metro ekufuneka uye kuyo. Ukusuka kwisikhululo senqwelomoya saseSheremetyevo ungafika e-Rechnoy Vokzal metro nge-minibus 949 okanye ngebhasi 851, ungaya e-Planernaya metro nge-minibus 948 okanye nge-817. Thatha malunga nemizuzu engama-50 ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseBelorussky ngesitayile kunye nemizuzu engama-35.